ဒီခေတ်မှာ စိတ်ညစ်ရင် နိုက်ကလပ်တက်သတဲ့ နောင်တစ်ခေတ်ဆိုရင်ကော | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဒီခေတ်မှာ စိတ်ညစ်ရင် နိုက်ကလပ်တက်သတဲ့ နောင်တစ်ခေတ်ဆိုရင်ကော
ဒီခေတ်မှာ စိတ်ညစ်ရင် နိုက်ကလပ်တက်သတဲ့ နောင်တစ်ခေတ်ဆိုရင်ကော
Posted by moonpoem on Aug 1, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 21 comments
ရှေးခေတ် အဖိုးအဖွားတွေလက်ထက်က အဖြူအမည်းကားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဧည့်သည်တွေ
အိမ်လာလည် တဲ့ အခါ ရေနွေးကြမ်း ၊ လက်ဖက်၊ ထန်းလျက်နဲ့ ဧည့်ခံကြပါတယ်။
မင်းသားတွေ စိတ်ညစ်ရင် အသည်းကွဲရင် လက်ဝှေ့ ထိုးမယ်၊ အရက်သောက်ကြတယ်ပေါ့။
အဖေတို့ အမေတို့ လက်ထက်က ရောင်စုံစပေါ်ကာစ ဇာတ်ကားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဧည့်သည် အိမ်လာလည်ရင် ကော်ဖီ၊အအေးနဲ့ မုန့် ဧည့်ခံတယ်။ စိတ်ညစ်တဲ့အခါ အရက်သောက်ကြတာတော့ မပြောင်းလဲသေးပါဘူး။
အခု ကျွန်မတို့ ခေတ် မင်းသားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ ရင် ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည်သောက်တာထက်
ဘီယာသောက်တာ အရက်သောက်ရင်း အမြည်းစားရင်း စကားပြောဧည့်ခံတာပိုများတယ်။
စိတ်ညစ်ရင် နိုက်ကလပ်တက်မယ်၊ ကောင်မလေးတွေ နဲ့ တွဲကမယ်ပေါ့။
ကျွန်မတို့ ခေတ်ပြီးရင်လာမယ့်နောက်ခေတ်မှာကော ……..？
(ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်များဖြစ်ပါသဖြင့် လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲလွဲနိုင်ကြပါသည်)
ရန်ကုန်ရောက်တာ4နှစ်ပြည်.တော.မယ် တစ်ခါမှ မတက်ဖူးသေးဘူး
ရွာထဲက Old Services များရှိ၇င် သွားခါနီး လက်တို.ပါအုံးဗျ
မျက်စပစ်ပြလိုက်ပါ ကျွန်တော်လည်း အတွေ့အကြုံယူပြီး ပို့စ်ရေးတင်မလို့ ….
နောက်တစ်ခေတ်သိချင်လားပြောပြဘူ စောင့်ကြည်ပေါ့ မကြာမှီလာမည်မျှော်
ယူအက်စ်အိမ်တော်တော်များများကတော့ … ဧည့်သည်ကိုအိမ်မခေါ်ပါဘူး..။
သမီးရည်စားတို့.. သူငယ်ချင်းတို့…(လိင်တူမဟုတ်) သီးသန့်အိမ်ခေါ်..ကိုယ်နေတဲ့အခန်းခေါ်တာတော့ရှိပါတယ်..။
ဒါဆိုရင်လည်း… လူသားသဘာဝအတိုင်း.. စိတ်ဆန္ဒဖြေဖျော်ကြဖို့ပါပဲ..။
စိတ်ပျော်မှသာ သောက်တာပါ…။ အချိုးချရင်.. ပျော်လို့သောက်တဲ့သူက ..အပုံကြီးပိုများမယ်..။
စိတ်ညစ်ရင် အရက်သောက်တယ်ဆိုတာ… မြန်မာတွေမှာများတယ်ထင်တယ်..။
ယူအက်စ်အိမ်တော်တော်များများကတော့ … ဧည့်သည်ကိုအိမ်မခေါ်ပါဘူး..။
Because, our houses are messy or untidy.
( both husband & wife need to work hard &
cannot afford to hire domestic helper or housemaid ) ;)
ခုခေတ်က night club တက်တာမဆန်းတော့ဘူးလို့ ပြောကန်ုကြပြီဗျ
နောက်တစ်ခု၇ှိသေးတယ် သင်တန်းဆင်းပွဲတွေ ကျောင်းကပါတီတွေကိုလဲ
ဒေးလ်ကလပ်မှာ လုပ်ပြီး ပျော်ကြတာလေ …
အဲ့ဒီဒေးကလပ်ထဲ တခါရောက်ဖူးတယ် …15နှစ် 16နှစ် ကလေးတွေချည်း ခုန်နေတာနဲ့ .. .နားမကွဲခင်ပြန်ထွက်လာရတယ် ။ … မဟုတ်လျှင် နားပဲလေးတော့မလား … နားပဲ ကွဲတော့မလား ရင်တမမနဲ့ … ။
နောင်တစ်ခေတ်ဆိုရင်.. အပျင်းပြေ အိမ်မှာ ကောင်မလေးတွေခေါ်ပြီး ကဲကြပြီ (ဟိဟီး)
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဧည့်သည်လာရင် ရှေးက ရေနွေးကြမ်း လဘက်..ထညက်နဲ့
နောက်တခေတ် ကြတော့ လဘက်ရည် ကော်ဖီ ကိတ်မုန့် စတာတွေနဲ့ ဧည့်ခံတယ်..
ခုခေတ်တော့ ဘီယာဆိုင်မှာ ဘီယာသောက်ရင်း ဧည့်ခံ ကြတယ်..
ဆိုတော့ကာ. . ဘီယာသောက်ကြတာဟာ လက်ခံနိုင်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်သွားပြီလားဟင်?
တို့တွေ ခေတ်နောက်မှာ အတော် ဝေးဝေး ကျန်ခဲ့သလားလို့…
ဟိုတစ်လောက ညစာစားပွဲတစ်ခုသွားတော့ အသိလင်မယား နဲ့ တူတူထိုင်တယ်။ စားကြသောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ သိကြတဲ့အတိုင်း ယောင်္ကျားလေးတွေအချင်းချင်း အရက်ငှဲ့ပေးကြတယ်။ အသိယောင်္ကျားလေးကတော့ အရက်ဖြတ်ထားတယ်ဆိုပြီး အတင်းငြင်းပြီး မသောက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပုလင်းကို ယူလိုက်တော့ အံ့သြသွားမိတယ်။ နောက်မှ ဘေးကသူ့မိန်းမကို ငှဲ့ပေးတာ ဖြစ်နေတယ်။ အံ့ရော အံ့ရော။ အဲဒါကော ဘယ်ခေတ်ရောက်သွားတာလဲ မသိဘူး။
ကလပ် တက်ဖို့ ကတော့ 
နားပူဒဏ် မခံ နိုင်လို့ တစ်ခါ မှ မတက်ဖူးပါ
တက်ဖူး သူတွေ ရဲ့ပြန်ပြောစကားများ အရ တော့
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ နိုက်ကလပ် တက်တဲ့ အမျိုးသမီး ၁၀၀ မှာ
၈၀ က ဘာညာ ပါ တဲ့……
ရွှေဘိုသား နဲ့ king ရေ ရန်ကုန်လာရင် night club တက်ဖို့ခေါ်မယ်။ကျွန်တော်လဲမရောက်ဖြစ်ဘူး။မဖွင့်ရင်။
မဖွံ့ဖြိုးဘဲ ဆင်းရဲမွဲတေသော ပြည်သူပြည်သား များသောနိုင်ငံလို့ဆိုမှတိကျမယ်။
သီချင်းလေးရှိခဲ့ဘူးတယ်လေ “ စိတ်ညစ်လို့အရက်ကိုသောက်မယ်။ အရက်သောက်တော့ စိတ်ညစ်ရမယ်။ အကြောင်းရှာတော့ ခေါင်းမှာချာချာလည် ” NIGHT CLUB မရှိတဲ့ နေရာမှာ စိတ်ညစ်ရင်အများစု က ktv သွားမယ်။ မာဆပ်သွားမယ် ဒီလိုပဲ လုပ်ကြတာ။ နောက်တော့ ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ တမင်တကာ ပိုက်ဆံသွားဖြုန်းကြတာ။
ကိလပ် က ပြန်လာတဲ့နေ့ဆို မျက်လုံးတွေ တအားကိုက်တာ ဘယ်သူကြောင့်မှမဟုတ်ဘူး ကောင်းမယေတွေ ကြောင့် သူတိုတွေ ပေ့ါ သီချင်းအသံကစပယ်ရှယ်ထုပြီးဆို စပယ်ရှယ် ခါပြီးပဲ ပြုတ်ကျလာမှာကို တွေးတွေးပြီ စိုးရိမ် နေရတာ ကြောင့် မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံ ပါဘူး ၀တ်ထားတာကလဲ (သိတယ်မှလား) မျက်လုံး တခြားနေရာ လွှဲလိုမရအောင်လုပ်ထားပြီးသား
သူတိုနဲ့ တွဲတော့ မကရဲပါဘူး ဒီကအကောင် ရင်ခုန်သံ က သီချင်းအသံကို ဖုန်းလွှမ်းသွားမှာဆိုးတယ်
ငါတို့ရဲ့ လေးပေါက်ကတော့ မန္တလေးလာရင် ဘီယာဆိုင်မှာ ဧည့်ခံမယ်တဲ့ဗျ….
လေးပေါက်ရေ… လာဖြစ်ရင် တကယ် တိုက်ရမယ်နော်…